Shirka madaxda wadamada xubnaha ka ah IGAD ayaa maanta ka furmaya dalka Jabuuti… – Hagaag.com
Shirka madaxda wadamada xubnaha ka ah IGAD ayaa maanta ka furmaya dalka Jabuuti…
Shir madaxeedka 38aad ee aan caadiga ahayn ee waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa maanta oo Axad ah ka furmaya magaalada Jabuuti, iyadoo looga hadlayo arrimo dhowr ah oo la isku haysto iyo arrimo deg deg ah oo ku saabsan gobolka Bariga Afrika.
Hogaamiyaasha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah Ururka IGAD iyo Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki, waxay gaareen Jabuuti si ay uga qeybgalaan shir madaxeedka oo la qabanayo xilli caqabado waaweyn ka jira xiriirada labo geesoodka ah iyo xiisadaha gobolka ka taagan.
Shir madaxeedku wuxuu ku bilaaban doonaa furitaanka khudbadaha Ra’iisul wasaaraha Suudaan, Abdullah Hamdok, oo dalkiisa madax ka ah kalfadhiga hadda socda, iyo Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyo Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki.
Waxaa durba hareeyey shirka Jawiga kala duwanaanshaha iyo xiisadaha u dhexeeya dalalka gobolka, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasi oo xiisada xiriirka u dhexeeya u muuqdo mid sii kordhaya, kaasoo gaaray heer xiriirka diblomaasiyeed kala go’o, marka lagu daro muranka xadka Suudaan iyo Itoobiya ee ku saabsan gobolka Fashaqa.
Waxa kale oo laga wada hadli doonaa arrimo badan oo khuseeya Afrika, oo ay ka mid yihiin horumarka laga gaadhay geeddi-socodka nabadda ee Koonfurta Suudaan, iyo Washington oo tirtiraysa aqoonsiga Suudaan inay tahay “dal kaalmeeya argagixisada”, iyo iskaashiga la dagaallanka masiibada Corona.
Xoghayaha Fulinta ee IGAD Workneh Gebeyehu ayaa sheegay in kasta oo ay jiraan dhammaan khilaafaadka u dhexeeya hoggaamiyeyaasha tiro ka mid ah waddamada xubnaha ka ah; Si kastaba ha noqotee, waxaa ka go’an inay xal u helaan arrimaha taagan inta lagu jiro shir-madaxeedka.
Wuxuu sharaxay in muhiimada kulankan uu ka yimid xaqiiqda ah in si toos ah u wada hadlaan hogaamiyaasha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah iyadoo la tixgelinayo aafada Corona.
Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin inay IGAD xal u heli karto khilaafaadka, iyadoo loo marayo khibradihii hore ee ay ku guuleysatay sida soo celinta nabadda Soomaaliya, joojinta dagaallada ka socda koonfurta Suudaan, iyo taageeridda xalka siyaasadeed ee Suudaan.
IGAD waxay ka kooban tahay 8 dal oo kala ah Jabuuti, Sudan, Koonfurta Sudan, Somalia, Kenya, Uganda, Itoobiya iyo Eritrea.
Hay’addan ayaa waxaa la aasaasay sideetameeyadii qarnigii la soo dhaafay iyada oo ah hay’ad ka shaqeysa horumarinta dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika, ka hor inta aan lagu darin dhinaca amniga ee sagaashameeyadii, xarunteeduna tahay Jabuuti.